XiangShan, iyo Chinese RISC-V processor inodarika iyo Cortex-A75 | Linux Vakapindwa muropa
XiangShan, iyo Chinese RISC-V processor inodarika iyo Cortex-A75
Mazuva mashoma apfuura iyo Institute of Information Technology yeChinese Academy yeSainzi yakavhurwa chirongwa XiangShan, mairi yave ichivandudza kubva 2020 processor-yakashama yakavhurika processor inoenderana neRISC-V (RV64GC) kuraira kwakamisikidzwa dhizaini uye kuita kwayo kunosvika kumhanyisa kweSiFive yazvino Performance Performance P550 core.
Zvinoenderana nevakagadziri, RISC-V cores iri pasi peXiangshan CPU ichave yakakurumbira pakati pevagadziri vema processor senge Linux yeanoshanda masystem Xiangshan ichagadzirwa uchishandisa 28nm process tekinoroji neTaiwanese TSMC (kunze kwekunge zvirango zvatemwa neUnited States) uye ichi chichava chizvarwa chekutanga chemakorodhi anonzi Yanqi Lake.
RISC-V inopa yakavhurika uye inochinjika muchina kuraira system iyo inokutendera iwe kuti ugadzire microprocessors yezvisingaiti zvinoshandiswa kunze kwekuda mvumo yemubhadharo kana kuisa mamiriro ekushandisa. RISC-V inokutendera iwe kuti ugadzire akazara akazara maSoC nema processor.
Parizvino, pahwaro hwerisosi yeRISC-V, makambani akati wandei nenharaunda dziri pasi pemarezinesi emahara akasiyana (BSD, MIT, Apache 2.0) arikugadzira gumi nemaviri akasiyana eakagadzirwa microprocessor cores, SoCs uye machipisi.
Iyo purojekiti yakaburitswa pasi petsananguro yemabhuroko ehurdware mumutauro weChisel, iyo inoshandurwa kuVerilog, chirevo chekumisikidza chinoenderana neFPGA nemifananidzo kutevedzera mashandiro echip mune yakavhurika Verilog simulator.
“Kunyangwe hazvo chinangwa chedu chenguva refu kuenda kumberi chiri kufambirana ne [Cortex-] A76, ichiri kuenderera mberi. Isu tinoda pasi-pasi-iterative optimization. Icho chinangwa chekusimudzira agile hachisi chekutora kona. Chiitiko chakaunganidzwa neIntel neArm pamusoro pemakore, isu zvakare tinofanirwa kuunganidza zvishoma nezvishoma.
Schematics uye tsananguro dzekuvakisa dzinowanikwawo (anopfuura mazana mana magwaro nemakumi mashanu ezviuru emitsetse yekodhi yakazara), asi mazhinji ezvinyorwa ari muChinese, pamwe neDebian inoshandiswa sereferensi yekushandisa sisitimu kuyedza kuitiswa kweFPGA.
XiangShan inozviti ndiyo yepamusoro soro RISC-V chip, inopfuura iyo SiFive P550. Kuongororwa kweFPGA kwakarongerwa kupedzwa mwedzi uno uye zita rekodhi "Yanqi Lake" ndeye 8-musimboti prototype chip inoshanda pa1,3 GHz uye inogadzirwa kuTSMC ichishandisa tekinoroji kubva 28 nm.
"Tine tariro yekuti XiangShan anogona kurarama kwemakore makumi matatu," akadaro Bao, mushanduro, muchirongwa chazvino pachirongwa ichi. “Tine chibvumirano chekusangana zvakare mumakore makumi matatu tozoona kuti XiangShan chichava chii. Nekudaro, kuti uwane ichi chishuwo, kuchine matambudziko mazhinji nematambudziko anofanirwa kugadziriswa.
Chip inosanganisira 2MB cache, memory memory inodzora ne tsigiro yeDDR4 ndangariro (inosvika 32 GB ye RAM) uye PCIe-3.0-x4 interface.
Iko kushanda kweyekutanga chip mune iyo SPEC2006 bhenji inofungidzirwa pa7 / Ghz, inoenderana neARM Cortex-A72 uye Cortex-A73 machipisi.
"Agile dhizaini yekugadzira uye chikuva chatakavaka kare chinotsigira timu yebudiriro yevanhu vanodarika makumi maviri, izvo zviri kure nekukwana," akadaro Bao. "Izvo zvatinofanira kufunga izvozvi ndeyekuti tivake sei seti yematanho akasvinudzwa, akavhurika uye akavhurika enzira dzinogona kutsigira kuvandudzwa kwenzvimbo yakavhurika yenharaunda yevanhu zviuru zviviri
Pakupera kwegore, kugadzirwa kwechipiri prototype kwakarongwa "South Lake" ine dhizaini yakavandudzwa, inogadzirwa neSMIC ine 14nm process tekinoroji uye kuwedzera kuwanda kusvika ku2 GHz.
Iyo yechipiri prototype inotarisirwa kuzadzikisa kuita kwe10 / Ghz pane bhenji SPEC2006, iri padyo neARM Cortex-A76 uye Intel Core i9-10900K processors, uye inopfuura iyo SiFive P550, inokurumidza RISC-V CPU pa8.65 .XNUMX / Ghz.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa kunobva kodhi yeXiangShan, iyo yakaburitswa pasi peMulanPSL2, paGitHub.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » XiangShan, iyo Chinese RISC-V processor inodarika iyo Cortex-A75
Ivo vane tariro yakanyanyisa kunyangwe ichiri kuyedzwa uye vachipihwa chokwadi chekuti mazhinji ezvinyorwa ari muChinese pavakaiwana muChirungu. Zvisinei, ndinobvuma kuti ramangwana rinenge riri RISC-V.
Iyo nyowani vhezheni yeTor 10.5 browser yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Kodzero yekugadzirisa inowedzera kutsigira uremu